Imboni Engcono Kakhulu Yokwenza Ucansi Ethuthukisa Ama-Hormones powder Umkhiqizi
/Imikhiqizo/Ukuya ocansini kuthuthukisa amaHormoni
I-AASraw inikeza izinhlobo zocansi ezithuthukisa ama-hormone powder ngokuhlinzeka okuzinzile, singathumela i-powder yezidakamizwa zocansi emhlabeni wonke, ikakhulukazi e-USA, eYurophu, isevisi ye-imeyili isebenza kahle futhi iwuhlobo lokulethwa kwasekhaya, oluphephile kakhulu. Ukwengeza, i-oda lenqwaba lingasekelwa ngentengo eqhudelana kakhulu.
Khuluma ne-AASraw Manje
Thenga I-Hormones Enhancing Powder
I-Dapoxetine HCL Powder (129938-20-1)-COA
I-Avanafil Powder (330784-47-9)-COA
2. Ingabe Eminye Imithi Ingathinta I-CIALIS?
Amazinga wabesifazane e-estrogen, progesterone, ne-testosterone ngokwemvelo ancipha ngokukhula, ikakhulukazi ngesikhathi nangemva kokuya esikhathini. Thola izindlela zokugcina ucansi lwakho lushayela phezulu, ngisho namazinga akho e-hormone aphansi. Futhi, kwamanye amadoda, kanye neminyaka iphakama, idrayivu yocansi iyehla. Futhi, ikakhulukazi, amanye amadoda anenkinga yokungasebenzi kahle kwe-erectile. Ukuze usebenzise imithi efanele yokuthuthukisa ubulili, basize bajabulele impilo, noma impilo engcono yezocansi.
Ukuba nezinkinga zokwakhiwa ngezikhathi ezithile akusona isizathu sokukhathazeka. Uma ukungasebenzi kahle kwe-erectile kuyinkinga eqhubekayo, noma kunjalo, kungadala ukucindezeleka, kuthinte ukuzethemba kwakho futhi kube nomthelela ezinkingeni zobudlelwano. Izinkinga zokuthola noma ukugcina ukwakhiwa nazo zingaba wuphawu lwesimo sempilo esiyisisekelo esidinga ukwelashwa kanye nengcuphe yesifo senhliziyo.
imithi ebizwa nge- “nitrate” evame ukubekelwa izinhlungu esifubeni
I-AASraw inikeza imikhiqizo yekhwalithi ephezulu ngokuthunyelwa okuphephile.Siyakwamukela ukuthintana nathi maduze!